Ugbu a n'ahịa "Ọkụ niile ahụ", nke kachasị ọhụrụ si Ángeles Caso | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ugbu a na ere «All na ọkụ», ọhụrụ si Ángeles Caso
Taa akwụkwọ akụkọ ikpeazụ nke mmeri ọtụtụ na-aga ahịa Ọnọdụ Angeles n'aka nke Akwụkwọ akụkọ Planeta. Akwụkwọ ọgụgụ, akpọrọ Ọkụ niile, na-akọ akụkọ banyere ụmụ nwanyị atọ nwere obi ike na-ede akwụkwọ n'ime ụwa nke ụmụ nwoke ndị nwere mmekọrịta nzuzo.
Debere na narị afọ nke XNUMX, Ọkụ niile Gbanye n'ime ndụ nke ụmụ nwanyị atọ nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi bụ ndị jisiri ike inupụ isi megide ụkpụrụ omume ọjọọ nke obodo Victoria wee bụrụ nnukwu ndị edemede na ụwa edebere maka ụmụ nwoke.
Nchịkọta nke "Ọkụ ahụ niile"
Julaị 16, 1846. Na paradaịs nke Haworth, ụmụ ada nwanyị atọ nke ụkọchukwu na-ebido ụbọchị site na ilekọta ọrụ ụlọ ebe ha na-eche mgbede na-abịa, mgbe ha nwere ike itinye onwe ha n’ide akwụkwọ akụkọ ha chọrọ iwepụta. Ha bụ ụmụnne nwanyị Brontë, ụmụ nwanyị atọ, site na akwụkwọ, lanarịrị ọdachi ezinụlọ kemgbe ha bụ nwata.
Charlotte na-ede - Jane Eyre, Emily Wuthering elu na Anne Agnes Gray. Ighna-ekpe ekpere ọdịnihu pụrụ iche nke na-echere ọrụ edemede ha, mmadụ atọ na-agbanye ha nrọ ha, nkụda mmụọ ha na agụụ ha zoro ezo, na-eme ka ụlọ ahụ gbara ọchịchịrị ghọọ oghere jupụtara na ìhè.
Banyere Angeles Case
A mụrụ Ángeles Caso na Gijón na 1959. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Art History. Ihe odide ya gunyere akwukwo, akuko di mkpirikpi, edemede ya, akwukwo ihe omuma, akwukwo umuaka, ntughari ya, na ihe nkiri. Ọ bụkwa onye na-ede akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi dị iche iche. A sụgharịrị ọrụ ya n'asụsụ iri na ise. Akwụkwọ akụkọ ya gụnyere Elisabeth nke Austria-Hungary ma ọ bụ akụkọ a bụrụ ọnụ, Ibu nke onyinyo (1994 Planeta Award finalist), Ogologo oge (Fernando Lara Award 2000) na Ebe ocheeze nelu Akwụkwọ akụkọ ya Megide ifufe ọ meriri Planeta Prize 2009, Nrite maka akwụkwọ akụkọ kachasị mma na China 2011 na Giuseppe Acerbi Prize 2012 na XNUMXtali.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ugbu a na ere «All na ọkụ», ọhụrụ si Ángeles Caso
5 akwụkwọ Agatha Christie ga-agụrịrị
Akwụkwọ edemede na-emetụ mkpụrụ obi aka